December, 29-2013 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
War-saxaafadeed kasoo baxay Maamulka Sare Idaacadda VOD Radio XAmar ayaa lagu beeniyay in Idaacadda Xamar ay ka tirsan tahay ama ay ku biirtay Ururada Saxaafadeed Danaha Gaarka laga leeyahay ee iska soo horjeedo kuwaas oo dhawaan lagu dhawaaqay halka kuwo kalena la filayo in dhawaan lagu dhawaaqo.
Agaasimaha Idaacadda Radio Xamar VOD Xasan Yaasiin Cali ayaa Beeniyay in uu ka tirsan yahay Ururada iska soo horjeedo ee ka jira dalka Somalia kuwaas oo dano gaar laga Leeyahay, waxaana uu kaga digay Urur La Sheegay in ay ku mideysan yihiin Idaacado ooDhawaan looga dhawaaqay magaaalada Xamar uu Magaca idaacadda Xamar VOD ku Been Abuuray inay ka tirsan tahay.
“Waxaa Cadeenayaa Idaacadda Kama Tirsana Ururada Saxaafadeed ee Danaha gaarka ah ku dhisan haddii ay ahaan lahaayeen kuwo hore u jiray iyo Kuwo Hadda Kadib lagu dhawaaqi doonno ayuu yiri Agaasimaha Idaacada Radio Xamar VOD Xasan Yaasiin Cali.
Dhawaan ayaa Urur la sheegay inay ku mideysan yihiin idaacado badan oo dalka Somalia kajira looga been abuuray Radio Xamar inay xubin ka tahay Idaacadan.
Ugu dambeyn Maamulka Idaacadda wuxuu ugu digayaa Dhamaan kooxaha Ururada Saxaafadeed Sheeganaya ee ka been abuuraya Magaca idaacadda Ay ka qaadi doonto Tallaabo Sharciga Waafaqsan oo la Tiigsan doonaan Sharciga.